Warar - Shir gaar ah
At 3:30 pm on Ogosto 7, 2020, shirkadeena lagu qabtay shir gaar ah wax soo saarka weyn xarunta dhexe ee xarunta Yongkang. Shirkadaha ka socda warshadaha qalabka ayaa si gaar ah loogu casuumay inay ka soo qayb galaan shirka. Diyaar garowgeena taxaddarran, shirkadeennu waxay tusisay dubbe dillaac koronto oo ah JH-168A 2200W, dubbe dillaac koronto oo JH-4350AK ah, dubbe dillaaca korantada JH-150 iyo alaabooyin kale oo cusub dhagaystayaasha.
Raadinta joogtada ah ee waxqabadka iyo hal-abuurnimada, cilmi-baarista iyo soo-saarka shirkadeena ayaa raacaya isbeddelka, awood u siinaya hagaajinta, abuurista alaabooyin taxane ah oo si gaar ah loogu talagalay Jiahao. Isla mar ahaantaana, qaabeynta wax soo saarka iyo soosaarka si loo sameeyo horumarka iyo hal-abuurka la xiriira. Gaar ahaan badeecooyinka saliidda, waxaan sii wadeynaa inaan horumarinno noocyo cusub, shaqo taxaddar leh, heer sare, istiraatiijiyadda iibka ee mustaqbalka, waxaan sidoo kale siinnaa talooyinka u dhigma, waxaanna hageynaa jihada iibka badeecada mustaqbalka.
Wixii loogu talagalay horumarinta mustaqbalka iyo qorshaynta isbeddelka istaraatiijiga ah ee Jiahao, shirkadeena ayaa sidoo kale sameysay sharaxaad faahfaahsan. Xilliga dhaqaalaha faafa, waa inaan beddelnaa oo aan cusboonaysiinnaa oo aan u abuurnaa moodallo iyo wadiiqooyin cusub oo loogu talagalay ganacsiga e-ganacsiga. Kaliya sidan oo kale ayaan kula wadaagi karnaa saamiga socodka suuqa oo aan ku xaqiijin karnaa wada noolaanshaha guuleysiga.
Qof walba wuu ku faraxsanaa kulanka. Shaqaalaha goobta ayaa si dulqaad leh u sharraxay una muujiyey badeecooyinka cusub, oo ay ku jiraan muuqaalka sheyga, sida saxda ah ee loogu shaqeynayo, iyo faahfaahinta naqshadeynta, astaamaha, shaqooyinka, iwm, si ay shirkadaha macaamiisha u yeelan karaan faham ballaadhan oo ku saabsan badeecad kasta oo ay xaqiijiyaan qorshahooda khibrada.
Waxaan rajeyneynaa in bandhiggan, aan u gudbin karno macluumaadka ku saabsan horumarka shirkadeena mustaqbalka, oo aan wax badan ka ogaanno macluumaadka jawaab celinta suuqa iyo macluumaadka dalabaadka macaamiisha.
Waqtiga boostada: Nofeembar-20-2020